သူမ၏ခင်ပွန်းဒေါက်တာဆမ် Sheppard, အောက်ထပ်အိပ်ပျော်စဉ်တွင်အဆိုတော် Marilyn Sheppard ရက်စက်စွာအသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာ Sheppard လူသတ်မှုထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတော့သူအကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာပေမယ့်သူကခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ခဲ့မတရားမှု၏အမာရွတ်များအမြဲတမ်းခဲ့ကြသည်ခဲ့သည်။ အက်ဖ် Lee က Bailey Sheppard ရဲ့လွတ်လပ်မှုနှင့်ဝမ်ဘို့စစ်တိုက်ကြ၏။
ဆမ်နှင့်အဆိုတော် Marilyn Sheppard:
ဆမ် Sheppard သည်သူ၏အကြီးတန်းအထက်တန်းကျောင်းလူတန်းစားအားဖြင့်လူ "အောင်မြင်မှအများစုမှာဖှယျရှိသညျ" မဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည်အားကစားမတ်, ရှာဖွေနေကောင်းသည်နှင့်အကောင်းတစ်မိသားစုထံမှလာ၏။ အဆိုတော် Marilyn Sheppard Hazel မျက်စိနှင့်ရှည်လျားသောအညိုရောင်ဆံပင်နှင့်အတူ, ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆမ်စက်တင်ဘာလ 1945 ခုနှစ်တွင် Physicians ၏ Los Angeles မြို့ Osteopathic School မှဘွဲ့ရပြီးနောက်လက်ထပ်အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်နောက်ဆုံးမှာနေစဉ်နှစ်ခုချိန်းတွေ့စတင်ခဲ့သည်။
သူကဆေးကျောင်းမှဘွဲ့ရခဲ့သည်ပြီးနောက်ဆမ်သည်သူ၏လေ့လာမှုများဆက်လက် Osteopathy ဒီဂရီသူ၏ဆရာဝန်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူက Los Angeles မြို့ကောင်တီဆေးရုံတွင်အလုပ်လုပ်သွား၏။ သူ၏ဖခင်ဒေါက်တာရစ်ချတ် Sheppard နှင့်လညျးမိမိနှစ်ခုအစ်ကို, ရစ်ချတ်နှင့်စတီဖင်ဆရာဝန်တစ်ဦးကမိသားစုဆေးရုံပြေးနှင့်မိသားစုလက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဖို့ 1951 နွေရာသီအတွက်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကိုပြန်သွားဖို့ဆမ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်။
ယခုအားဖြင့်လူငယ်စုံတွဲလေးနှစ်အရွယ်သားရှမွေလ Resse Sheppard (Chip) ရှိခဲ့နှင့်ဆမ်ရဲ့အဖေကနေချေးငွေနှင့်အတူ, သူတို့ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအိမ်ပြန်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အိမ်ဂလားပင်လယ်အော်ကျေးရွာ, Cleveland တစ် Semi-အထက်တန်းလွှာဆင်ခြေဖုံးရှိ Lake အီရီကမ်းရှာနေကျော်မြင့်မားသောချောက်ထဲပေါ်မှာထိုင်လေ၏။
အဆိုတော် Marilyn ဆရာဝန်တစ်ဦးမှလက်ထပ်ဖြစ်ခြင်း၏ဘဝအသက်တာသို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူမသည်မိခင်တစ်ဦး, homemaker ကြီးနှင့်၎င်းတို့၏မက်သဒစ်ဘုရားကျောင်းမှာသမ်မာကမျြးအတန်းသင်ပေးတယ်။
အဆိုပါစုံတွဲသည်, နှစ်ဦးစလုံးအားကစားနိူး, ဂေါက်သီး, ရေနှင်းလျှောစီးကစားခြင်းနှင့်ပါတီများအဘို့အကျော်မိတ်ဆွေများကိုရှိခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်အပန်းဖြေနေခဲ့ရသည်။ အများဆုံးစေရန်, ဆမ်နှင့်အဆိုတော် Marilyn ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြဿနာများ၏အခမဲ့သလိုပဲ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဆမ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဝေဒနာခံစားနေရခဲ့သည်။
အဆိုတော် Marilyn ဆူဟေးယက်အမည်ရှိဟောင်းတစ်ဦးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြည့်ရန်သူနာပြုနှင့်အတူဆမ်ရဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသည်။ စုံတွဲပြဿနာများကြုံတွေ့ပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအားကောင်းလာစေပြီးဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်ဆမ် Sheppard အဆိုအရ, ကွာရှင်းဆွေးနွေးတင်ပြဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ထိုအခါအဖြစ်ဆိုးလုပ်ကြံလေ၏။
တစ်ဦးက Bushi ဆံပင်ကျူးကျော်:
ဇူလိုင်လ 4, 1954 ၏ညဉ့်တွင်, လေးလကိုယ်ဝန်ရှိသူအဆိုတော် Marilyn, အဆမ်သန်းခေါင်တိုင်အောင်အိမ်နီးချင်းများဧည့်ခံ။ အိမ်နီးချင်း left ပြီးနောက်ဆမ်ဟာအိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နှင့်အဆိုတော် Marilyn အိပ်ရာထံသို့သွားလေ၏။ ဆမ် Sheppard အဆိုအရသူသည်မိမိနာမအခေါ်ဆိုသူ၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်နိုးခဲ့သည်။ သူကသူတို့ရဲ့အိပ်ခန်းပွေးမိမိဇနီးနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ "Bushi ဆံပင်လူ" အဖြစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားပေမယ့်ချက်ချင်းသတိလစ်သူ့ကို rendering, ဦးခေါင်းအပေါ်ဒဏ်ခတ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုငါမြင်၏။
Sheppard နိုးလျှင်, မိမိအသွေးတော်ဖုံးမယား၏သွေးခုန်နှုန်းကိုအမှန်ခြစ်ထားနှင့်သူမသေဆုံးဖွတျ။ ထို့နောက်သူသည်သူထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲတွေ့သောသူသည်မိမိသားအပေါ်စစ်ဆေးထံသို့သွားလေ၏။ သူကဆင်းပြေးခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ကျောတံခါးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အောက်ထပ်ကနေလာမယ့်ကြားနာဆူညံသံ။ သူကအပြင်ဘက်သို့ပွေးလေ၏။ သူတစ်စုံတစ်ဦးကရေကန်ဆီသို့သူသူနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားအဖြစ်ရွေ့လျားတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်းနှစ်ခုတိုက်ထုတ်လာတယ်။ Sheppard နောက်တဖန်ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဝိညာဏ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ တစ်လရဲ့အဆမ်ပြီးနောက်ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပျက်ကိုဖော်ပြရန်မယ်လို့ - ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သူ့ကိုယုံကြည်သည်။
ဆမ် Sheppard အဖမ်းခံရသည်:
ဆမ် Sheppard ဒီဇင်ဘာလ 21, 1954 တွင်ဇူလိုင်လ 29, 1954 မှာမိမိမယား၏လူသတ်မှုများအတွက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်သူဒုတိယဒီဂရီလူသတ်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံရခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းသာသံသယရှိသူ, ဆမ် Sheppard အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သော Pre-ရုံးတင်စစ်ဆေးမီဒီယာ blitz တစ်ဦးကတဖက်သတ်တရားသူကြီးများနှင့်ရဲများအတွက်ရလဒ် မှားခံယူချက် မှောက်လှန်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမယ်လို့။
မကြာမီရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ 7, 1955 ရက်တွင်ဆမ်ရဲ့အမေသတ်သေ။ နှစ်ပတ်အတွင်း, ဆမ်ရဲ့အဖေဒေါက်တာရစ်ချတ် Allen က Sheppard, hemorrhaged တစ်ဦးအစာအိမ်ပြည်တည်နာကနေသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အက်ဖ် Lee က Bailey Sheppard အဘို့တိုက်
Sheppard ၏ရှေ့နေအသေခံပြီးနောက်အက်ဖ် Lee ကဘေလီဆမ်ရဲ့အယူခံကျော်ယူနိုင်ရန်မိသားစုကငှါးခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ 16, 1964 တွင်, တရားသူကြီး Weinman သည်သူ၏ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း Sheppards '' ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုငါးချိုးဖောက်မှုများရှာတွေ့ပြီးနောက် Sheppard ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာနေစဉ်, Sheppard Ariane Tebbenjohanns, ဂျာမနီကနေချမ်းသာတဲ့, ဆင်းလှ, ဆံပင်ရွှေရောင်နဲ့စာအဆက်အသွယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုအကျဉ်းထောင်ကနေကသူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြီးနောက်နေ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်။
မေလ 1965 ခုနှစ်, ဖက်ဒရယ်အယူခံတရားရုံးကသည်သူ၏ယုံကြည်ချက်ပြန်လည်ဖို့မဲပေးကြသည်။ နိုဝင်ဘာ 1, 1966 တွင်, တစ်စက္ကန့်တရားခွင်စတင်ခဲ့ပေမယ့်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူဤအချိန် Sheppard ရဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေရန်ပေးထားသော။
သက်သေခံချက် 16 ရက်အတွင်းပြီးနောက်ဂျူရီဆမ် Sheppard သော်လည်းမလွန်ကျူးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့အခမဲ့ဆမ်ဆေးပညာအလုပ်လုပ်ပြန်ရောက်ပေမယ့်သူလည်းအကြီးအကျယ်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏အသက်တာကိုလျင်မြန်စွာသည်သူ၏လူနာတဦးတည်းသေဆုံးပြီးနောက်သူသျောလှဲချြောများအတွက်တရားစွဲခံခဲ့ရပြီးနောက်ဖျက်သိမ်း။ 1968 ခုနှစ်တွင် Ariane သူ့ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူမ၏ခြိမ်းခြောက်သူမထံမှပိုက်ဆံခိုးကွောငျးဖျောပွနှင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားခဲ့သည်ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။
တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက် Sheppard လိုလားသူနပန်း၏ဤလောကသို့ရတယ်။ သူဟာယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်အသုံးပြုမှာ "အာရုံကြောကိုင်" မြှင့်တင်ရန်, မိမိအာရုံကြောနောက်ခံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်ရေး၏မှတ်တမ်းများတွင်တည်ရှိသည်ခဲ့ဖူးဘူးသော်လည်း 1969 ခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိအနပန်းမန်နေဂျာရဲ့ 20 နှစ်အရွယ်သမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်။
ဧပြီလ 6, 1970 တွင်, ဆမ် Sheppard မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်၏ရလဒ်အဖြစ်အသည်းပျက်ကွက်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ သေမင်း၏ကသူ့ထိုအချိန်တွင်သူတစ်ဦးကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောနှင့်ကျိုးသူဖြစ်၏။
သူ့သားရှမွေလ Reese Sheppard မိမိအဘ၏နာမကိုအမှီရှင်းလင်းရေးအားမိမိအသက်တာကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
Related စာအုပ်များ & ရုပျရှငျမြား
တရားရေးမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်: စင်သီယာအယ်လ် Cooper ကနှင့်ဆမ် Reese Sheppard (1995) အားဖြင့် Sheppard လူသတ်မှုဖြစ်ရပ်မှန်၏စစ်မှန်သောပုံပြင်။
အဆိုပါမှားက Man: အဒေါက်တာဆမ် Sheppard လူသတ်မှုဖြစ်ရပ်မှန် (အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်) ရက်နေ့တွင်အဆိုပါနောက်ဆုံးစီရင်ချက်
စမ်းသပ်အပေါ်ဒေါက်တာဆမ် Sheppard: အဆိုပါအစိုးရရှေ့နေတွေနဲ့ Jack P. DeSario ဝီလျံဃ Mason ဆိုအားဖြင့်အဆိုတော် Marilyn Sheppard လူသတ်မှု
Tupac Shakur ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်အဘယ်ကြောင့်
မိုက်ကယ် Skakel ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို - အပိုင်းတစ်ခုမှာ
လေး-တစ်နှစ်တာနီဗားဒါးကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
ကို 'Twilight' 'Saga တှငျအဘယျရုပျရှငျမြားရှိပါသလဲ
ဓာတ်ပုံပြခန်း: တီယန်မင်ရင်ပြင်, 1989
ပသခါပွဲကို (Pesach) အတ္ထုပ္ပတ္တိ
စုန်း, အမျိုးသမီး, နှင့်စုန်းအတတ်
'' အထွေထွေဆေးရုံကြီး '' အက္ခရာဧလိရှဗက် Webber Spencer
ကို '80s ၏ထိပ်တန်းလှံတံ Stewart ကတစ်ကိုယ်တော်သီချင်းများ
Punt ပြန်သွားအဖွဲ့တစ် Boost လိုအပ်ပါသလား?
သင်လုပ်ချင်တဲ့ဘဝက Create 8 လှုံ့ဆော်
တစ်ဦးက Non-မွတ်စလင်အဖြစ်ဗလီလာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက် Etiquette သိကောင်းစရာများ
မအောင်မြင်သောဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းရင်း: အမျိုးသမီးများနေ့ကိုယ်ဝန်ဖျက် Choose အဘယ်ကြောင့်
GAUTHIER - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း
အဘယ်အရာကိုအိန်ဂျယ် v ။ အရေးပါသောအများနှင့်ကျောင်းဆုတောင်းခြင်းသည်အကြောင်းသိထားမှ
Grammar အတွက် Extraposition
အဆိုပါ Beatitudes ဘာတွေလဲ?
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Grumman TBF Avenger
ရာဇဝတ်မှုရှုခင်းအင်းဆက်ပိုးတစ် Corpse ၏မရဏ၏အချိန်ဖော်ပြဘယ်လို
Mirabai (Mira Bai), Bhakti စိန့်နှင့်ကဗျာဆရာ